Main nyowani maficha ebluetooth 5.0 | IPhone nhau
Main nyowani maficha ebluetooth 5.0
Iyo bluetooth yekutaurirana system yave, mushure mekuverengeka kukwira nekudzika, imwe yeanonyanyo shandiswa ekutaurisa zviyero munyika. Mumashanduro ayo ekutanga, tese takashandisa nzira iyi yekutaurisa kupfuudza vese vanyowani, mifananidzo nemavhidhiyo kubva kune imwe terminal kuenda kune imwe, ndiyo yaive nzira yekumhanyisa pasina kuenda kuPc uye nekushandisa kwese nhare, mashandisiro atisina kushandisa zvakare hazvizombodaro.
Asi tekinoroji tekinoroji yauya nenzira refu mumakore ano. Imwe yemabhenefiti akakosha ayo akaita kuti ifambire mberi isimba shoma rekushandisa pamwe nekuuya kweshanduro 4.0, iyo ine mudziyo wakabatana neiyo smartphone maawa makumi maviri nemasere zvisingaite bhatiri uye semuenzaniso isu tine smartwatches anoshandisa izvi system kutaurirana kuti ubatanidze kune iyo smartphone.
Vhiki rapfuura, Bluetooth SGI, mutumbi unoona nezve kutsvagisa nekusimudzira kweiyi nzira yekutaurirana, yakazivisa vhezheni nhamba 5 yeiyi protocol yekutaurirana, inozosvika pakupera kwegore rino kana kutanga kwegore rinouya, saka zvinogona kuti mhando nyowani dze iPhone haigone kushandisa zvese zvakanakira iyo ichatipa isu tichienzanisa neyazvino vhezheni 4.x yeazvino iPhone, iPad uye iPod Kubata mamodheru.
Bluetooth SGI yakanangana nekuwedzera huwandu hwezviito kuitira kuti kubatana neIoT zvishandiso zviitwe nenzira yakapfava, yakachengeteka uye inokurumidza, pamusoro pekuwedzera huwandu hwavo, huwandu hwakawedzeredzwa kana. Uye zvakare, kumhanyisa kwekubatana uye kufambiswa kwedata kwakawedzerwa nekusvika ku800%.
Sangano iri rakatarisawo pamabhakoni, mabheaconi sekudanwa kwaanenge achiitwa muchirungu, kuitira kuti chirongwa ichi chekutaurirana chive chinowoneka mudzimba, semakambani, munzvimbo dzezvitoro ... nekuti vachatizivisa nekukasira zvichienderana nenzvimbo yedu, ndatenda kunharaunda yayo yakakura yekuita.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Noticias » Main nyowani maficha ebluetooth 5.0
X kuti iyo iPhone 6 haienderane neiyo android ???? Makaralı !!
Mhoro Nicolas. Mabasa anoti iyo Bluetooth protocol yaive yekutaurirana protocol uye kwete protocol yekuendesa mafaera zvinoenderana neyakagadzirwa nemugadziri, saka Apple zvishandiso zvaisazove neizvozvo kushanda. Nekufamba kwenguva Bluetooth yakashanduka ikava chiyero chekuchinjisa, kwete mafaira chete Asi Apple yakatevedzera mutemo mumwe chete. Ndinovimba rimwe zuva vanochipedza icho whim.
Kutanga kuratidzwa mushure memazuva matanhatu neIOS 10